Deepin 20.3 inosvika neLinux 5.15 uye kuvandudzwa mumapurogiramu edesktop | Linux Addicts
Kunenge mwedzi nehafu pashure vhezheni yapfuuraIsu tatova nechikamu chitsva chekugovera kwakakurumbira kweChinese. Tiri kutaura nezvazvo Deepin 20.3, pakati pezvitsva zvavo zvinobuda pachena kuti vakagadziridza kernel kune yazvino vhezheni. Deepin Linux inowanzoisa macores maviri mukugovera kwedu, imwe ichangoburwa uye yekupedzisira LTS, chimwe chinhu chavakaitawo panguva ino, kunyangwe iyo yekupedzisira LTS ichipindirana neiyo yekupedzisira yakagadzikana vhezheni yeLinux kernel, saka kune maviri maLTS.
Kana kugoverwa uku kwakakurumbira, kune zvikonzero zviviri: kutanga, zvakanyanya kudaro muChina, nyika yakabva purojekiti; chechipiri, nedhesiki rake, iro rinosanganisira a graphical nharaunda ine interface yemazuva ano uye maapplication anobatsira akadai sechidzitiro chekushandisa. MuDeepin 20.3 zvese zvakagadziridzwa zvishoma, chimwe chinhu chaitarisirwa nekushandurwa kweiyo yekutanga decimal.
Nhau dzakakurumbira dzeDepin 20.3
Linux 5.15. Inotaurwa kuti ndiyo yakagadzikana kernel uye mamwe mabhenefiti ayo anounza. Deepin anoti kune LTS uye yakagadzikana iripo, saka inofanirwa kupa Linux 5.10 uye Linux 5.15, kunyangwe 5.15 iri zvakare LTS.
Kuvandudzwa kweAlbum app, senge zvirinani batch kusarudzwa kwemafoto uye mabhatani matsva ekukurumidza kuita, pakati pezvimwe zvinhu zvitsva.
Ikozvino snapshot turusi inotsigira kupuruzira snapshots, pane kutora akawanda snapshots.
Yekudimburira kiibhodhi yekutsvaga pasi rose yawedzerwa.
Yakawedzera vhidhiyo yeruzivo interface.
Ffmpeg rutsigiro rweNVIDIA makadhi.
OCR zvakare inotsigira mipumburu.
Yakawedzerwa manejimendi, preview uye vhidhiyo yekutsvaga.
Kuvandudzwa muchirongwa cheGRUB EFI chekugadzira mafaera eEFI neazvino GRUB chiono.
Kuvhurwa kweDeepin 20.3 zviri pamutemo, uye inogona kutorwa kubva ku yako yeprojekiti link, OSDN, Google Drive uye kuburikidza netiweki Torrent. Mushure mekuedza zvese sarudzo, ini ndinokurudzira kuyedza Google Drive, inova ndiyo yega inofamba nekukurumidza (kunyangwe kurodha dzimwe nguva kunocheka ...). Kana iwe uchingoda iyo desktop, ichakurumidza kuwanikwa paLinux kugovera iyo inopa iyo, senharaunda Manjaro DDE. UbuntuDDE haina kuburitsa vhezheni yayo 21.10, saka inoita kunge isiri sarudzo. Chero zvazvingava, Deepin 20.3 yasvika uye ikozvino inogona kuiswa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Deepin 20.3 inosvika neLinux 5.15 uye kuvandudzwa mumapurogiramu edesktop